Huawei patents ARK OS, sistemu eji arụ mpi na Android | Gam akporosis
ARK OS, nke a bụ otu a ga - esi sụgharịa sistemụ arụmọrụ Huawei ka ya na android dọọ mpi
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ihe dị njọ Ọnọdụ Huawei Mgbe veto US nwere ike gbanwee site na nkwekọrịta azụmahịa na China, ọnọdụ dị ugbu a nke ụlọ ọrụ Shenzhen dị njọ n'ezie. ¿Have nwere ohere ịzọpụta onwe gị na-enweghị gam akporo ma ọ bụ nkwado nke nnukwu ụlọ ọrụ America?
Anyị amaghị nke ahụ, mana ihe doro anya bụ na onye na-emepụta Asia nwere ezigbo ọnụọgụ iji gaa n'ihu na-alụ ọgụ na ahịa telephony. Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị gwara gị banyere ya aha sistemụ arụmọrụ maka ahịa Asia, anyị amabakwala ihe a ga-akpọ ya na Europe: Huawei Igbe OS.
Huawei ARK OS, OS ohuru iji zoo Android
Iji mee nke a, ụlọ ọrụ Asia nyefere na European Union Intellectual Property Office nke usoro aha nwere ike inye anyị echiche nke ihe a ga-akpọ sistemụ arụmọrụ ya. Anyị na-ahụ ọtụtụ nhọrọ: Huawei Igbe OS, Huawei Igbe, Igbe na OS. Ee ee, e debara aha ha na May 24, ya mere o doro anya na anyị na-eche aha sistemụ arụmọrụ na-akwado ịsọmpi na gam akporo.
Ọ bụ eziokwu na ọ bụ eziokwu doro anya na usoro okike nke Google maka ngwaọrụ mkpanaka dị ike n'ezie, echiche nke Huawei ịmalite sistemụ arụmọrụ ya nwere ike ịbụ nsogbu maka ụlọ ọrụ Mountain View. Na mbu: ọtụtụ ndị ọrụ nwere ike ịwụli usoro okike nke Huawei ọ bụrụ na ha nwere ike ịga n'ihu na-eji ngwa ha kachasị amasị, gụnyere WhatsApp na Instagram, ọtụtụ ọrụ Google, na n'elu nke ahụ, ịzụta ekwentị na ọnụahịa ka mma.
Otu ihe aghaghi ịkọwapụta nke ọma: Huawei abụghị onye nzuzu, ya mere ọ maara na ọ kwesịrị ịdọta ndị ahịa, yabụ ọ nwere ike ịbụ sistemụ arụmọrụ ya Igbe OS ibu a ndụdụ nke gam akporo na-enye gị ohere iji ya ilekota nke ngwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » ARK OS, nke a bụ otu a ga - esi sụgharịa sistemụ arụmọrụ Huawei ka ya na android dọọ mpi
Samsung Galaxy M30 na-emeliterịrị gam akporo 9 achịcha
OPPO Reno Z: Akara ohuru ohuru